Astaamaha ugu muhiimsan ee weelasha baakadaha dhalada waa: kuwa aan sun lahayn, dhadhan lahayn; Transparent, qurux, caqabad wanaagsan, hawo-mareenka, alaabta ceeriin ee hodanka ah iyo kuwa caadiga ah, qiimo jaban, loona isticmaali karo si isdaba joog ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka iska caabinta kuleylka, caabbinta cadaadiska iyo iska caabinta nadiifinta. Waxay noqon kartaa ...
Dhalooyinka quraaradaha iyo weelasha waxaa inta badan loo isticmaalaa warshadaha khamriga iyo kuwa aan aalkolada lahayn, kuwaas oo ilaalin kara firfircoonida kiimikada, ma dhalaysnimada iyo in aan la marin karin. Qiimaha suuqa ee dhalooyinka quraaradaha iyo konteenarrada sannadka 2019 waa 60.91 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, oo la filayo inuu gaaro 77.25 bilyan oo Mareykanka ...
Dhalada dhalada waa weelka wax lagu duubo ee cuntada iyo sharaabka iyo alaabooyin badan, oo si ballaaran loo isticmaalo. Muraayaddu sidoo kale waa nooc ka mid ah baakadaha taariikhiga ah. Xaaladda noocyada badan ee alaabada baakadaha lagu daadinayo suuqa, weelka dhalada ayaa wali ku jira soo dejin ...
Astaamaha iyo noocyada dhalooyinka quraaradaha ah
Waxaa jira noocyo badan oo dhalooyinka quraaradaha ah, laga soo bilaabo dhalooyinka yaryar oo leh Dhalooyinka quraaradaha ee madmadowgu dhammaad ma leh. Marka la eego habka wax soo saarka, dhalooyinka dhalada guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: dhalooyinka la mideeyey (iyadoo la isticmaalayo dhalooyinka nooca) iyo dhalooyinka kontoroolka (iyadoo la adeegsanayo ...
Dhalooyinka quraaradaha ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha kala duwan
Maaddaama ay tahay walxo aan dabiici ahayn, muraayaddu waxay leedahay hawl qabadkeedu deggan yahay, waana mid siman oo hufan, taas oo si gaar ah ugu habboon baakadaha iyo keydinta daroogada. Isla mar ahaantaana, marka la barbar dhigo walxaha kale, qiimaha muraayaddu waa mid jaban. Sanadihii ugu dambeeyey,...